Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #138
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 4
Waan u soo dejiyay FSX Dayax-gacmeedka '' 747 Airforce One maalmo ka hor ...
In boksharka waxaan arkay iimanka Falcon 50 autopilot, guddi ama wax walbaa magaca ...
Miyaan u isticmaali karaaFalcon50 Autopilot sidoo kale diyaarad kale iyo maxaan u baahanahay inaan sameeyo si aan tan ugu duulo diyaaradeyda kale, qofna ma yaqaan ...... ?????
fiiri lifaaqa ....
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #139
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Gh0stRider203, luis1245
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #168
HAA! Waxaad awoodi kartaa. Anigaa anigaa sameeyay. Waxay ahayd waqti yar laakiin si fiican u caawi ...
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: FvS
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #169
Btw waan ka xumahay inaanan ka jawaabin si dhakhso ah. Ma arko boostadaada. Xumaantayda
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #174
Wax badan oo aad u jawaabto, waxaan isku dayi doonaa in ay hesho ...
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #175
lemme ogoow haddii maqaalkani uu yahay mid waxtar leh. Sidaan u idhi, Waxaan horey u sameeyay ... laakiin waxa ay aheyd LOL
Gawaarida Falcon50 sano 3 5 bilood ka hor #176
Gh0stRider203 ayaa qoray: Nasiib wacan!
Waxaan ku guuleystey inaan ka helo guddiga Falcon50 Autopilot ee diyaaradaha kale, hadda waxaan ku duuli karaa diyaaradda shaashadda buuxda oo isticmaali Falcon50 Autopilot shaashadda hoose ee hoose ee hoosta ... Arag muuqaal kuxiran .. .....
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray FvS.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.470